Ọgwụ goozberị: olee otu a ga-esi jiri ọrịa na ụmụ ahụhụ fesaa osisi - Osisi - 2020
Etu esi akpoo gooseberries na oge opupu ihe ubi, ya na tomato
Gooseberries bụ ezigbo mkpụrụ osisi beri ochie toro n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ubi a niile. N'agbanyeghị na-agbasokarị uche banyere unpretentiousness nke a shrub, gooseberries karịa ndị ọzọ beri kụrụ, ata ahụhụ site na ọrịa na na pests. Naanị na igbochi ọrịa n’oge niile ka osisi ahụ ga-amị mkpụrụ zuru ezu. Na ihe ịrịba ama nke mbụ nke ọrịa ma ọ bụ ọgụ nke ụmụ ahụhụ, ihe ọkụkụ ahụ chọrọ usoro nchịkwa ọzọ.
Ọrịa na nje dị ize ndụ na gooseberries
Gooseberries nwere ike ibute ọrịa ndị na-esonụ:
ntụpọ ma ọ bụ septoria;
Semụ ahụhụ na-emerụ ahụ gooseberries:
akụrụ currant akọrọ;
currant gall midge.
Kedu ihe na-etinye ihe ọkụkụ ọkụ ma ọ bụrụ na agwọghị ya
Etu esi agha gooseberries na mmiri, udu mmiri na udu nmiri
Oge na ikike nchebe nke gooseberries si pests na ọrịa na-enye gị ohere inweta ezigbo owuwe ihe ubi. Ma ọ bụghị ya, mkpụrụ ya na-ebelata nke ukwuu. Ihe ọkụkụ ahụ niile nwere ike ịnwụ, yana nnukwu mmebi, ọbụna osisi ahụ dum. Nke ọrịa, mildew powdery kasị dị ize ndụ, na nke ụmụ ahụhụ na - nla na sawfly.
Otu esi eri gooseberries na oge opupu ihe ubi, udu mmiri na udu nmiri
Ọgwụ mgbochi maka ọrịa na ahụhụ kwesịrị ibido na mmalite oge opupu ihe ubi. Nke a dị ezigbo mkpa n'ihi na ọrịa dị mfe iji gbochie karịa ịgwọ ya ma emesịa. N'oge, ọgwụgwọ nke goozberị bushes a rụrụ dị na ogbo nke ahịhịa:
tupu akpụ akpụ akụrụ;
n’oge akụrụ na-eto;
n'oge budding (tupu okooko);
Treatmentdị ọgwụgwọ osisi, nkọwa ha na ntuziaka maka ojiji
E nwere ọtụtụ ụzọ isi mesoo nje na ọrịa. Onye ọrụ ubi ọ bụla kwesịrị ikpebi otú e si agwọ grisị bushes na oge opupu ihe ubi site na pests na ọrịa.
Uring gbanye mmiri esi mmiri
Esi mmiri gooseberries ke ndaeyo - bestzọ kachasị mma iji mmiri
Boilinggbara mmiri pọpụpọ bushes na mmalite oge opupu ihe ubi tupu ịmụrụ na ọzịza nke akụrụ bụ usoro mmado. Nke a bụ ụzọ dị irè ma bụrụ nke a na-ejikọtaghị ọnụ iji chịkwaa ụmụ ahụhụ na ọrịa, nke na-anaghị akwụ ụgwọ nnukwu ihe onwunwe.
Ọ dị mkpa ịmata! Scalping nke osisi nwere ike rụrụ naanị na ike ndụ. Ọ bụrụ na akụrụ ọnụ, mmiri esi mmiri ga-emebi ha.
A na-awụsa mmiri site na mmiri ịwụsa mmiri site na iji ya na ifesa ahụ ma ọ bụ site na onye na-ete ya. Ọ gaghị ekwe omume ịwụkwasị akụkụ ala nke ahịhịa site na bọket, enwere nnukwu ihe ize ndụ nke imebi akụrụ na Ome ya. Ala dị n'okpuru na gburugburu ọhịa ahụ gbarụrụ ala iji bibie ụmụ ahụhụ niile, ụmụ ahụhụ na ahịhịa ndị tochiri na akwụkwọ dara ada na elu ala. Mmiri dị oke ọkụ mgbe ị na-eme nhazi ekwesịghị ịdakwasị ya na mgbọrọgwụ olu yana Ome dị na ọkwa ala. Nke a nwere ike ibute ọnwụ nke osisi.
Uring gbanye mmiri esi n’elu gooseberries n’oge opupu ihe ubi
Busheshazi bushes n'ụzọ dị otú a na-ebibi microorganisms na nje na mmalite nke oge ọkọchị, na-egbochi mmụba nke ọrịa na mwakpo nke nje n'oge a kara aka. Enwere ike mepụta mmiri ọ Hotụ Hotụ na mmiri ọdịda, mgbe ọdịda daa. Usoro a na-eme omume gburugburu ebe obibi.
A na-eji sọlfọ ọla kọpa (ọla kọpa sulfate, ọla kọpa sulfate) lụso ọgụ mildew, scab na goozberị anthracnose. A na-agbaze ntụ ntụ n'ime mmiri ọkụ n'ime nnukwu iko maka ebumnuche na-abụghị nri, dilisie aka na pasent atọ ịta ke akpa plastic.
Attentionaa ntị! Ihe ndị eji ọla na ename eme ihe adịghị mma maka kọntaktị na azịza ya, n'ihi na mmeghachi nke mmiri na-apụta. A na-eji sọlfọ na-agbasa ọfụma na mmalite amị n'ọnwa ruo mgbe imeghe ya.
Ọgwụ mmiri Bordeaux
A na-ebu mmiri mmiri mmiri gooseberries Bordeaux iji chebe megide nchara, skaab, anthracnose na ụdị ntụpọ niile. Iji kwadebe ngwaahịa ahụ, a na-eji ihe abụọ eme ihe: quicklime na sulfate ọla kọpa. Mee ya otu ụzọ n’ime atọ. Achọrọ ite atọ na-abụghị sọlfọ na nke enweghị mmiri. N'otu n'ime, a na-agbanye sọlfọ ọla na mmiri ọkụ. N’aka nke ọzọ, ha na-eji mmiri oyi ejiri ngwa ngwa were ọsọ na-anyụ mmiri, na-eji ntụ ma ọ bụ akwa nyọnpụ ya. Mgbe ahụ, a na-ewebata ihe ngwọta nke sulfate ọla kọpa n'ime mmiri ara ehi lime na mmiri iyi, na-akpali mgbe niile.
Nkwadebe mmiri Bordeaux
Iji kwadebe ihe ngwọta 1-3%, 100-300 g ọla kọpa sulfate na 150-400 g nke quicklime, mmiri chọrọ 10 l.
Ozi ndị ọzọ! Bordeaux mmiri mmiri ekwesịghị ga-diluted mmiri.
A na-eji sọks dị ka mmiri agbasa dị ka mmiri akọrọ mgbe anwụ na-ekpo ọkụ.
na mmalite oge opupu ihe ubi (Eprel) na mbubreyo ọdịda (November) - uzo ato;
ke mbubreyo mmiri (May), ndaeyo (July) na mmalite mgbụsị akwụkwọ (Septemba) - otu uzo edozi isi.
Ọ dị mkpa na ihe mejupụtara ahụ na-adaba na akụkụ abụọ nke ukwu na nke ala nke epupụta. Nchịkwa goozberị n'oge ọkọchị na-eme nanị mgbe ị buliri tomato.
Anotherzọ ọzọ nke ịlụso ọrịa na nje ọgụ bụ ọgwụgwọ nitrafen. Nke a bụ ọgwụ dị oke omimi ma ọfụma. A na-eme ntanụ iji chebe megide ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ, yana site na skaab, anthracnose na ụdị ntụpọ niile. Ha na-ahazi ngalaba, n'ime ọhịa na ala gburugburu.
Nitrafen - uzo zuru uwa maka mbu
A na-eme ọgwụgwọ mgbochi na March-Eprel, tupu mmiri iyi amalite. Fesie ya na uzo abuo ma obu ato (200-300 g nke tapawa n’elu mmiri 10) otu ugboro n’ime afo ato.
Nitrafen nwere mmetụta akpọrọ na akwa na larvae nke ụmụ ahụhụ ndị nọ n'oge oyi. Iji bibie oria, o zuru ezu igbasa ala gburugburu bushes otu ugboro. A na-echekwa ihe ahụ n'ime ala ruo ọnwa 1-2.
I kwesịrị ịma! Nitrafen nwere ụmụ oke, ụmụ anụmanụ, nnụnụ, azụ, a beesụ na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ. Ọ bụ ihe anakwere na ihe ahụ na-abanye na mmiri, iji ihe ọkụkụ nwere ọgwụ.
Urea (urea) bụ fatịlaịza nitrogen. Mgbe mmiri spraying gooseberries na ihe ngwọta nke urea (500 g kwa 10 l mmiri), ụmụ ahụhụ na-ehi ụra mgbe oyi anwụ, karịsịa aphids. Ahụmahụ ndị na-elekọta ahịhịa na-enye ndụmọdụ urea na November, na ifesa alaka na mmachi nke na-agba ala gburugburu osisi.
Ihe ozo maka mmiri ogwu bu ihe ndi ozo. Ha sitere na ihe dị ndụ. Nchekwa maka mmadụ na anụmanụ, enyela ihe ntaramahụhụ ahụhụ na gburugburu ebe obibi. A na-eji ihe ndị dị omimi eme ihe nke ọma maka ọgwụgwọ na mgbochi nke ọrịa na ụmụ ahụhụ. Ndị a gụnyere: Fitosporin-M, Alirin-B, Pentafag-S, Trichophytum, Bitoxybaxicillin, Mikosan. Ihe kachasị ewu ewu bụ Fitosporin.
Fitosporin - ngwaahịa ndu kachasị ewu ewu
Ndabere nke nkwadebe microbiological a bụ ala nke ahịhịa bacillus, nke na-egbochi uto nke nje. Ngwaahịa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na nje bacteria, ire ere, skaab, mildew powdery, ajari na ọrịa fungal na nje ndị ọzọ. Site n'enyemaka nke ọgwụ ahụ, ọ ga-ekwe omume ọ bụghị naanị ịgwọ ọrịa goozberị, kama iji nye mgbochi. Etu esi edozi gooseberries?
Na mado na-diluted na mmiri ọkụ n'ime iko iko (100 g kwa 0,5 l mmiri), tinye otu okpu ọ bụla mmiri mmiri mgbagwoju fatịlaịza (nwere mineral dị mkpa maka nkịtị mmepe nke hay bacillus) na-esi ọnwụ na a gbara ọchịchịrị ebe dịkarịa ala ụbọchị ise. Akwa na-acha ọcha kwesịrị ịmalite n’elu ngwakọta ahụ, nke na-egosi ịdị njikere ngwaahịa a maka ojiji. Na infusion nwere ike ịchekwa ọtụtụ ọnwa ụlọ ụlọ, ndị bara uru Njirimara anaghị agbanwe.
Attentionaa ntị! Iji kwadebe ihe ngwọta maka nhazi were 3 tbsp. l ngwakọta a kwadebere tupu oge eruo ma gbakwunye na 10 l mmiri. A na-efesa ahịhịa Goozberị na ala a gbara ha gburugburu na-awụsị ozugbo mmalite nke ihe ịrịba ama nke ọrịa ahụ. A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe na ihu igwe akọrọ, ọkacha mma mgbe anyanwụ dasịrị.
Iji gbochie ọrịa, otu ọgwụgwọ ezuru. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe ịrịba ama nke oria ahụ apụtalarị, mgbe ahụ ọ ka mma iji ọtụtụ ọgwụgwọ gaa site na nkeji 10-14.
Ugbu a n'ahịa enwere nnukwu nhọrọ kemịkal maka ịgwọ beri bushes:
Ọgwụ ogwu (nkwadebe maka igbu ụmụ ahụhụ, larvae na caterpillars ha): Actellik, Antitlin, Kemifos, Karate Zeon, Lightning, Sensei, Gladiator, Breter na ndị ọzọ.
Fungicides (ọgwụ maka ịlụ ọgụ maka ọrịa fungal): Topaz, Fundazole, Kaptan, Phthalan, Khometsin, HOM, sulfate ọla kọpa, ngwakọta Bordeaux na ndị ọzọ.
Ekwesịrị iji ha dabere na ndụmọdụ ndị dị na nkwakọ ngwaahịa ahụ. A na-eme nhazi dị na ala akọrọ, nke dị jụụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ n'uhuruchi.
Dị Mkpa! Ọgwụ kemịkal na-abụkarị nke na-egbu egbu. Ya mere, n'oge a na - ahazi ya, a na - eji ihe nchebe onwe ya: akwa pụrụ iche, uwe mkpuchi, roba ma ọ bụ ihe nkpuchi. Mee ihe kwesiri mmanye iji chebe mbuso agha.
Klọ ọgwụ ndị na-ewu ewu
Ọgwụ nke ahịhịa gooseberries si mildew na-egbu egbu, nke na-adịghị egbu egbu nye mmadụ, bụ nke ndị na-agwọ ọrịa na-arụ site na usoro ndị a:
1 ml nke ayodiin kwa 1 lita mmiri;
1 tbsp. l soda ash kwa 10 mmiri nke ncha nke mmiri;
1 lita nwere ike nke ash kwa 10 mmiri nke ncha nke mmiri;
infusion nke rotted nri - 1 akụkụ nri, 3 akụkụ mmiri.
Ndị mmadụ na-ahụ maka ọgwụ ụmụ ahụhụ:
okpukpo galiki: 200-300 g nke galiki ghere eghe (ma ọ bụ nke galiki) na-esi ọnwụ ruo ọtụtụ awa na mmiri 10 l, nje;
yabasị infusion: 200 g nke yabasị husks, 10 l mmiri, na-esi ọnwụ maka ụbọchị ise;
infusion nke n'elu tomato ma ọ bụ nduku: 1.5 n'arọ nke n'elu, 10 l mmiri, esi ọnwụ awa 3-4.
Ha na agba mgba nke currant akụrụ: ha na-ewepu nnukwu buds emetụta site na ohia na mmalite nke oge na-eto.
Ọ ka mma iji chebe gooseberries na ọrịa na pests
Kedu ụzọ kachasị mma iji chebe gooseberries? Esi esi gooseberries n'oge opupu ihe ubi site na pests na ọrịa? Na nkenke:
Correct teknụzụ ọrụ ugbo. Alternzọ ndị ọzọ: infusion nke ash ash, soda ash solution with a fluid, aspirin solution with soda soda, tansy decoction na ndị ọzọ. Chemicals: sulfate ọla kọpa, mmiri mmiri Bordeaux, Nitrafen, Skor, Rayek, DNOC, Arsenite na ndị ọzọ. Ngwa ahia ndu: Fitosporin-M.
Alternzọ ndị ọzọ: infusion ma ọ bụ ịchọ mma nke ash ash, ihe ngwọta nke soda ash na ncha mmiri na ndị ọzọ. Chemicals: Topaz, HOM, Topsin, Vectra, Rayek, Nitrafen, Bordeaux mmiri, vitriol na ndị ọzọ. Ihe omumu banyere ndu: Fitosporin-M, Alirin-B.
Kwachaa nke ọma na ịmị ya mgbe niile. Nitrafen na - ejikwa alaka (tupu mmalite sap flow). Cleaning na-eji akwa siri ike nhicha nke alaka, disinfection na 1% nke ọla kọpa sulfate ma ọ bụ 3% nke sọlfọ ọla.
Kacha mma aka gooseberries
Alternzọ ndị ọzọ: infusion ash na ncha, infusion galik, mustard powder solution, soda nwere iodine na ncha mmiri, usoro mmanya na-adịghị ike, nke Coca-Cola diluted na ndị ọzọ. Chemicals: Fufanon, BI-58, Aktara na ndị ọzọ. Ngwa ahia ndu: Fitoverm.
Ọkpụkpọ goozberị adịghị emetụta gall aphids.
Na-alụ ọgụ ndanda. Ọtụtụ usoro ndi mmadu: iji ayodiin, soda, mmanya, tar, osisi nwere isi pungent na ihe ndi ozo. Chemicals: Aktara, Confidor-Extra, Fufanon, Karbofos, Spark Bio na ndị ọzọ. Ngwa ahia ndu: Fitoverm.
Akụrụ Currant akọrọ
Usoro mwepụ nke buds na alaka, na-agba ha ọkụ. Alternzọ ndị ọzọ (ọgwụgwọ 2-3 kwa ọnwa). Chemicals: ịchọ mma wayo na sọlfọ, ether sulfonate, tedion. Ndị na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ: Boverin, Akarin, Fitoverm.
Ibe ma na-agba osisi mebiri emebi. Ativezọ ndị ọzọ: infusion kerosene, infusion nke walnut epupụta. Chemicals: DNOC.
Mgbe nile mbibi nke pest nests. Alternzọ ndị ọzọ: ngwọta ash, ngwọta nke ncha ájá, infusion nke n'elu tomato ma ọ bụ poteto, infusion nke mustard ntụ ntụ na ndị ọzọ. Chemicals: Karate, Spark, Kinmix na ndị ọzọ. Ngwa ahia ndu: Entobacterin, Lepidocide, Bitoxibacillin.
Kzọ Folk: infusion ash, infusion nke ilu wormwood, infusion nke ọgwụ chamomile, infusion nke tomato ma ọ bụ poteto, infusion nke paini paini na ndị ọzọ. Chemicals: Spark, Decis, Aktara, Karbofos, Kinmiks na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ na-elebara ọnọdụ nke osisi goozberị anya, na-agbaso usoro teknụzụ nke ugbo, na-ebu mgbochi ọrịa na ịlụ ọgụ megide ahụhụ ụmụ ahụhụ, goozberị ga-amasị owuwe ihe ubi hiri nne. N'ime ngwa agha nke ubi ma uzo ohuru iji luso oria na umu anumanu, ya na uzo ndi esi eme ihe dika ihe ndi ozo.